Dowladda Faransiiska oo ku guul dareysatay Joojinta Banaabaxyada, iyo kumanaan qof oo la xiray. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Faransiiska oo ku guul dareysatay Joojinta Banaabaxyada, iyo kumanaan qof oo la xiray.
On Dec 9, 2018 241 0
Todobaadyo xiriir ah, waxaa dalka Faransiiska ka socda banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan kooxaha gurmadka deg dega ee loo yaqaano Jaaka casta, kuwaas oo kasoo horjeeda sara ukac ku yimid qiimaha shidaalka lagu kala iibsado.
Magaalada Paariis oo ah caasimadda Faransiiska ayay ka socdaan banaanbaxyada ugu weyn, waxaana ka qeybgalaya kumanaan ruux oo kasoo horjeeda qiimaha shidaalka oo kordhay, iyagoona codsanaya in gebi ahaanba in meesha laga saaro qiima kordhinta shidaalkan.
Ciidamada Police-ka ayaa ku guul dareystay iney ka hortagaan banaanbaxyada, waxaana marba maalinta ka dambeysa sii kordhaya tirada dibad baxyaasha.
Waxay ciidamada Police-ku qabteen kumanaan ruux oo la rumeysanyahaya iney iyagu soo abaabulayaan banaanbaxyada, balse weli wax isbedel ah kuma imaan habsami socodka banaanbaxyada.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanual Macron ayaa sheegay iney suurgal tahay in meesha laga saaro qiimaha lagu kordhiyay shidaalka, balse kooxaha dibad baxyada wada ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha uu yahay mid uu ku doonayo inuu ku dejiyo carada shacabka.